पौराणिक कथनः पार्वतीका कारण बन्यो समुद्रको पानी नुनिलो ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /रोचक/पौराणिक कथनः पार्वतीका कारण बन्यो समुद्रको पानी नुनिलो !
पौराणिक कथनः पार्वतीका कारण बन्यो समुद्रको पानी नुनिलो !
शिव पुराणका अनुसार एक पटक देवी पार्वती महादेवलाई पतिका रुपमा पाउन भनि घोर तपस्यामा थिइन् । उनको तपस्याको तेज यतिधेरै थियो कि देवलोकमा बसेका देवताको समेत सिंहासन डगमगाएको थियो । जसका कारण देवता भयभीत भए । यसरी देवलोक सिंहासन डगमगाएपछि सम्पूर्ण देवता यस समस्याको समाधान खोज्न तर्फ लागे । तर समुन्द्र देव भने देवी पार्वतीको रुप देखि मोहित भए ।
महादेव पति पाउ भनि तपस्यारत पावर्तीलाई समुन्द्र देवको यो प्रस्तावले चोट पु¥यायो । उनले आफूले पति ठानेका महादेवको तिरस्कार सहन सकिनन् र क्रोधमा आई समुन्द्र देवलाई श्राप दिइन् ।
जीवनभर खुसी रहन बिवाहपछि अपनाउनुस् यी तरिका
जान्नुहोस् श्री स्वस्थानी व्रतकथाबारे चार रोचक प्रसंग
घरपालुवा बिरालोमा पनि देखियो कोरोना, बिरालोबाट मानिसमा सर्छकी सर्दैन ?
१ सय ३ बर्षकी बृद्धाले कोरोना जितेपछि अस्पतालको बेडमै दिइन् बियर पार्टी, तस्विर बन्यो भाइरल